प्रसुति गृहमा कोरोना संक्रमित ६ जना महिलाको उपचार गरिसक्यौं : डा. मिश्रा
अस्पताल आउन डराएर घरमा सुत्केरी हुँदा झन खतरा
२०७७ भदौ २६ शुक्रबार १६:४५:००
कोरोना भाइरस कोभिड (१९) का कारण गर्भवती महिलाहरुमा स्वासथ्य जोखिम बढेको छ । हिजोआज गर्भवती महिलाहरु अस्पताल जाने वा नजाने भन्ने बिषयमा अन्योलमा छन् । यस्तोे अबस्थामा पनि थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति गृहमा भने ६ जना कोरोना संक्रमित गर्भवतीको सफल उपचार भैसकेको प्रसुति गृहकी निर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्राले जानकारी दिइन् । जसमध्ये ३ जनाको अप्रेशन गरेर र ३ जनाको सामान्य प्रकृयाबाट सुत्केरी गराइएको उनले बताइन् ।
कोभिडको डरका कारण अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउनेको संख्या घट्दै गएको मिश्राले बताइन् । घरमा नै कतिपय महिलाहरु सुत्केरी हुँदा प्रसव पिडा वा अन्य समस्याका कारण मृत्यु समेत हुन सक्ने उनको भनाई छ । सकेसम्म घरमा सुत्केरी गराउन नमिल्ने उनको भनाई छ । कोरोनाका बिरामीको उपचारमा प्रसुति गृहले कोभिड र ननकोभिड अस्पतालको रुपमा दुईवटा भवन छुट्याएको छ । जसमा कोभिड संक्रमित महिलाहरुको कुपण्डोलमा रहेको भवनमा उपचार भैरहेको डा.मिश्राले जानकारी दिइन । स्वास्थ्यकर्मीहरुले बिशेष सावधानीका साथ उपचार गरेको र अहिले सम्म कोरोना संक्रमित १० जना सुत्केरी महिलाको भर्ना गरेर उपचार गराइएको उनले बताइन ।
कोरोना संक्रमित महिलाहरुको उपचार चुनौतीपुर्ण छ । कोरोनाका कारण सुत्केरी गराउन आउने महिलाहरुको संख्या घटेको भएपनि दिनहुँ ६० जना सम्मको सुरक्षित सुत्केरी गराइरहेको उनले बताइन् । कोरोना संक्रमितको उपचारमा भने १३ ÷१३ जना को टिम बनाएर बिरामीको उपचार गराईरहेको उनको भनार्ई छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु र उपचारमा खटिने डाक्टर नर्सहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाका सामाग्री उपलब्ध गराएर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन ।
गर्भवती महिलाहरुमा बच्चा कम चलेको छ,रगत बगिरहेको छ,पानी गईरहेको छ वा पेट दुखेको छ ,चक्कर आउने प्रेसर हाईभएको महिलाले अस्पताल जानैपर्ने उनको सुझाव छ । कोरोना भाइरसलाई हाउगुजीका रुपमा नलिई सुरक्षाका सामाग्री अपनाएर घरमा भन्दा आफुलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न र सुरक्षित सुत्केरी गराउनु पर्ने डा. मिश्राको भनाई छ । कोभिडको त्रासका कारण अस्पताल जान डराउँदा गर्भवतीको ज्यान नै जान सक्ने भएकाले सुरक्षित भएर अस्पताल जान डाक्टर मिश्राको सुझाव छ ।